Iindaba -Ingcaciso yolwazi olusisiseko malunga nenaliti yokubumba
Ingcaciso yolwazi olusisiseko malunga nokubumba ngenaliti
Oomatshini bokubumba inaliti ngoomatshini abakhethekileyo ekwenziweni kweemveliso zeplastiki, ezisetyenziselwa ukwenza iindawo ezahlukeneyo zeplastiki kwizithuthi, kwezonyango, kubathengi nakwizicelo zeshishini. Inaliti yokubumba yindlela ethandwayo ngenxa yezi zizathu zintlanu zilandelayo:
1. Amandla okwandisa imveliso;
2. Zombini iimilo ezilula nezintsonkothileyo zinokwenziwa;
3. Impazamo ephantsi kakhulu;
4. Izinto ezahlukeneyo zinokusetyenziswa;
5. Iindleko zempahla ekrwada esezantsi kunye neendleko zabasebenzi.
Umatshini ziphene yokubumba isebenzisa nentlaka zeplastiki kunye ngumngundo ukugqibezela ziphene sukube. Lo matshini ikakhulu yahlulwe kubini:
Ukubotshwa kwesixhobo-gcina ukungunda kuvaliwe phantsi koxinzelelo;
Isixhobo Inaliti-ukunyibilika nentlaka zeplastiki ramming yeplastikhi etyhidiweyo kwi ukungunda.
Ewe, oomatshini bakwakhona ngobukhulu obahlukeneyo, olulungiselelwe ukuvelisa iinxalenye zobungakanani obahlukeneyo, kwaye zibonakaliswa ngamandla okubamba anokuveliswa ngumatshini wenaliti.
Isibumba sihlala senziwe ngealuminium okanye ngentsimbi, kodwa ezinye izinto zinokwenzeka. Yahlulahlulwe yaziziqingatha ezibini, kwaye imilo yayo yenziwa ngokuchanekileyo kwisinyithi. Ukubumba kunokuba lula kakhulu kwaye kungabizi, okanye kusenokuba nzima kakhulu kwaye kubize. Ubunzima bulingana ngokuthe ngqo kuqwalaselo lwenxalenye kunye nenani lamalungu ekubumbeni ngakunye.
I-resin ye-Thermoplastic ikwimo ye-pellet kwaye lolona hlobo luqhelekileyo lwezinto ezisetyenziswayo ekubumbeni ngenaliti. Zininzi iintlobo zerinsin ye-thermoplastic enoluhlu olubanzi lweepropathi zezinto ezilungele ukusetyenziswa kweemveliso ezahlukeneyo. I-Polypropylene, i-polycarbonate kunye ne-polystyrene yimizekelo yee-resins ezisetyenziswa rhoqo. Ukongeza kukhetho olubanzi lwezixhobo ezibonelelwe yi-thermoplastics, zinokuphinda zisebenze kwakhona, zinokuchaneka kwaye kulula ukunyibilika.
Inkqubo yokubumba eyenziweyo kumatshini yokubumba inaliti inamanyathelo amathandathu asisiseko:
1. Ukubotshwa-kwesixhobo sokubamba somatshini kucinezela iziqingatha ezibini zokubumba kunye;
2. Inaliti-iplastikhi etyhidiweyo evela kwiyunithi yenaliti yomatshini iye yankqonkqozwa kwisikhunta;
3. Ukugcinwa koxinzelelo-iplastikhi etyhidiweyo efakwe kwi-mold iphantsi kwengcinezelo yokuqinisekisa ukuba zonke iindawo zelungu zizaliswe ngeplastiki;
4. Ukupholisa-vumela iplastiki eshushu ukuba ipholise kwimilo yenxalenye yokugqibela ngelixa lisembumbeni;
5.Ukuvula umngundo-isixhobo sokubotshwa komatshini obahlula ukungunda kwaye ukwahlule kubini;
6. Ukukhutshwa-imveliso egqityiweyo ikhutshwa ngaphandle kwisikhunta.
Inaliti yokubumba yitekhnoloji enkulu enokuveliswa ngobuninzi. Nangona kunjalo, iluncedo nakwiiprototypes zoyilo lokuqala lwemveliso okanye umthengi okanye uvavanyo lwemveliso. Phantse zonke izinto zeplastiki zinokuveliswa ngenaliti yokubumba, kwaye indawo yesicelo sayo ayinasiphelo, ukubonelela abavelisi ngendlela engabizi kakhulu yokuvelisa iindawo ezahlukeneyo zeplastiki.
Precision Inaliti Ukubumbela Inc., Thin Wall Inaliti Ukubumbela Machine, Inaliti ngqo, Precision Inaliti Ukubumbela, Ukubumbela Precision, Precision zeplastiki ziphene ziphene yokubumba,